Vaovao - Maninona no manana "MOQ" ny famokarana kitapo mahazatra?
Maninona no manana "MOQ" ny famokarana kitapom-batsy?
Mino aho fa hiatrika ny olan'ny famandrihana farafahakeliny ny olon-drehetra rehefa mitady mpanamboatra hanamboarana kitapo kitapo. Maninona ny orinasa tsirairay no manana fepetra takiana MOQ, ary inona no fatra ambany indrindra ao anaty indostrian'ny fampanjariana?
Ny habetsahan'ny kaomandy farafahakeliny ho an'ny kitapom-batsy vita am-paosy dia matetika napetraka amin'ny 300 ~ 1000. Arakaraka ny maha lehibe ny orinasa, ny ambony ny habetsan'ny kaomandy farany ambany. Misy antony telo lehibe.
1. Fitaovana. Rehefa mividy akora ny ozinina dia misy ihany koa ny faneriterena fatra farafahakeliny. Ny akora fototra dia mazàna dia 300 metatra ambany ambany (azo atao ny kitapom-batsy 400). Raha 200 kitapo fotsiny no ataonao, dia tsy maintsy mijanona ao amin'ny Inventory ireo fitaovana amin'ny kitapo 200 manaraka;
2. Ny vidin'ny bobongolo mahazatra ho an'ny kitapom-batsy sy ny fampandrosoana ho an'ny kitapom-batsy, na kitapom-batsy 100 na 10.000 dia mila bobongolo feno ianao, kitapo mahazatra, famolavolana santionany sy bobongolo dia mitaky US $ 100 ~ 500 vidin'ny bobongolo, Ny kely kokoa ny haben'ny baiko , ny fizarana vola bebe kokoa;
3. Ny vidin'ny famokarana betsaka ny kitapom-batsy namboarina: ny kitapo dia fiasan'ny tanana fotsiny. Ny kely kokoa ny habetsany dia mihisatra ny hafainganam-pandehan'ny mpiasa mpamokatra. Fantatra fotsiny amin'ny dingana iray, vita izany. Be loatra ny vidin'ny mpiasa.
Noho izany, ny MOQ dia mifandray amin'ny vidiny. Ho an'ny kitapo iray ihany, raha mahatratra 100 ianao, ny vidiny tokana dia manodidina ny 2 ~ 3 avo heny noho ny 1000.